China n'èzí esi nri gas grill Imepụta na Factory | Chuliuxiang
4+1 ọkụ igwe anaghị agba nchara gas bbq grill
Igwe ọkụ ime ụlọ
Nri gas esi nri n'èzí
azụmahịa nnukwu ọkụ ọkụ
6 burner gas cooktop nnukwu ọkụ ọkụ gas
gas 4 ọkụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ
Igwe ọkụ ọkụ nnukwu stovu
Igwe ọkụ Barbecue gas 3-burner nwere ebe a na-esi nri sara mbara yana tebụl akụkụ dị mma maka idowe trays na-eje ozi. Kọwaa spatula gị na mkpịsị aka gị na nko ngwá ọrụ ka ihe niile dị gị mkpa dị n'aka gị. Isi nri igwe anaghị agba nchara na-ejigide okpomọkụ ma dị mfe ihicha maka nri kacha ụtọ. Na igwe anaghị agba nchara na-enyere aka igbochi nchara na mgbawa ka oge na-aga.
Ọhụrụ a CLUX 3 burner gas grill bụ nke igwe anaghị agba nchara ma nwee ngụkọta ohere nri nke 339 square sentimita. Ejikọtara ya na ndị na-ere ọkụ 3, na-enye 30,000 BTU nke ọkụ na-ekpo ọkụ, ngwaọrụ a ga-emezu n'ezie ihe ị tụrụ anya mmanya. Sistemụ esi nri kpo oku nke otu nwere igwe anaghị agba nchara, ndị na-ahụ maka ire ọkụ na igwe anaghị agba nchara na-arụkọ ọrụ ọnụ na-ekesa ọkụ n'ofe ebe a na-esi nri ma na-ebelata ire ọkụ. Igwe ọkụ eletrik nwere ike ịgbanye ngwa ngwa, ebe a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-enye ebe a na-ekpocha achịcha ma na-edozi nri. Ihe nkedo na-eme ka ọ dị mfe ịkwaga, na temometa arụnyere na-enye ohere mgbanwe mgbanwe okpomọkụ.
Igwe ọkụ na-ekpo ọkụ ọkụ 3 grill
Ngwa panel Igwe anaghị agba nchara 410
Nha ngwaahịa 1215*535*1180mmH
Nkwakọ ngwaahịa 685*655*550mm
Ụdị LPG gas grill
Moq 270 setịpụrụ
Ngwa kichin n'èzí, oriri ubi
Nkwakọ ngwaahịa Ngwungwu igbe katọn
Oge mmepụta ihe 5-10 ụbọchị, ọ bụrụ na ị chọrọ ịtụ ọzọ tent, biko kpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla
Igwe ọkụ anaghị agba nchara: Propane gas grill nwere igwe anaghị agba nchara 3, nwere ike wepụta 30,000 BTU-kwa elekere yana sistemu mgbanye piezoelectric agbakwunyere, bido ngwa ngwa site na ntinye & ntụgharị nke njikwa njikwa.
AKWỤKWỌ: Igwe njikwa igwe anaghị agba nchara na chromium plating control knob na-eme ka propane gas grill na-amụbawanye ihe na nke siri ike, igwe anaghị agba nchara na thermometer arụnyere n'ime mkpuchi mkpuchi, ihe nkedo abụọ dị arọ na-agbagharị agbagharị maka nchekwa na ịkwaga.
PORCELAIN-ENAMEL WIRE COOKING GRATES: Ebe esi nri nke gas propane gas grill anyị bụ 471.8 gụnyere 339 square sentimita maka nri na 132.8 square sentimita maka ikpo ọkụ.
Akụkụ kpọkọtara: 46.46 L x 20.87 W x 41.14 H inch, na 29.5 inch Ogologo mgbe ị na-atụgharị ma nke tebụl akụkụ nke propane gas grill.
MULTIFUNCTION NA BAARA: Igwe gas propane a zuru oke na-ekele oghere ọ bụla dị n'èzí dị ka azụ azụ, ubi, ogige, mbara ala na mbara ihu nke ọtụtụ ezinụlọ, ọzọ oge niile maka isi nri n'èzí.
Nke gara aga: azụmahịa kichin kichin
Osote: Igwe ọkụ ime ụlọ
3 ọkụ ọkụ barbecue gas grill
3 ọkụ gas grill
ihe ọṅụṅụ mmanya
BBq grill kacha mma
n'èzí kichin gas imi
481sq inch n'èzí kichin gas grill
Igwe ọkụ ọkụ infrared 6 na-ere ọkụ gas
4 grill gas na-ere mmanya mmanya
Azụmahịa 8 ọkụ gas grill
Debanye aha na akwụkwọ akụkọ anyị ka ị nweta akụkọ dị mkpa, onyinye dị ịtụnanya & n'ime scoops: